शक्ति कपुरकी छोरी नायिका श्रद्धा कपुरसँग विवाह गर्न तयार छन् नेपाली मूलका रोहन श्रेष्ठ ? – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/शक्ति कपुरकी छोरी नायिका श्रद्धा कपुरसँग विवाह गर्न तयार छन् नेपाली मूलका रोहन श्रेष्ठ ?
बलिउड कलाकारहरु जिवनको दोस्रो मोडमा धमाधम प्रवेश गरिरहेका छन् । केही अभिनेत्रीहरु आमा बन्दै छन् भने कसैले विवाह गरिरहेका छन् । भर्खरै अभिनेता वरुण भवनले लामो समय देखिको प्रेमलाई विवाहमा परिणत गरे । २४ जनवरीमा फेसन डिजाइनर नताशा दलालसँग विवाह गरेका छन् ।
त्यसपछि नै भारतीय सोसल मिडियामा रोहन र श्रद्धाको विवाह हुन लागेको हो कि भन्ने अनुमान गरिएको छ । श्रद्धा कपुर र रोहन श्रेष्ठबीचको प्रेम सम्बन्धबारे निकै अघिदेखि विभिन्न खबर आइरहेका छन् । तर दुवै जनाले त्यसलाई सार्वजनिक रुपमा स्वीकार भने गरेका छैनन् । तर दुवैले नकारेका पनि छैनन् ।
बम्बे टाइम्ससँगको एक कुराकानीमा श्रद्धाले आफुले अहिले विवाहको बारेमा सोच्ने फुर्सद नभएको बताएकी थिइन् । उनले आफु अहिले फिल्मवाट करियर बनाउने योजनामा मात्र रहेको बताएकी थिइन् । तस्विर तल हेर्नुहोस
सर्लाहीमा २ बालिका पोखरीमा मृत भेटिए
श्रीमानले सुन्नै नसक्ने आरोप लगाएर बे इज्ज त गरेपछि श्रीमती सार्वजनिक भइन्, खोलिन् यस्तो वास्तविकता (भिडियो हेर्नुस्)